Fialonana sy Tahotra vs Fahafahana sy Tohitra
2015-07-25 @ 23:38 in Ankapobeny
Raha ny tontolo eto Madagasikara, eto Antananarivo indrindra indrindra, dia tokony ho niresaka politika mafana vay aho. Tsy nanao izany mihitsy anefa ny tena ary niniako natao iny tsy hiteny na inona na inona. Efa fantatry ny mpamaky ny fironana politika misy ahy ary tsy mbola miova amin'izany aho. Aoka kosa anefa hotsorina fa mila mitandrina fatratra izay te-handresy amin'ny fomba madio araka izay tratra amin'io fifidianana io fa tsy ao amin'ny biraom-pifidianana ihany no ilaina ny fanaraha-maso amin'io fotoana io fa eny amin'ny zato metatra na mihoatra manodidina ny biraom-pifidianana... ary tsy izay ihany, fa efa nisy lahatsoratra iray manontolo nataoko momba io raharaham-pangalaram-bato io. Fividianana olona no mety hanjaka eo raha mbola tsy misy fiovana avy amin'ny tsikaritra nolazaiko tamin'io lahatsoratra io.
Efa sehatra nasionaly ny politika noresahina teo ambony fa misy ihany koa ny politika tena mihatra amin'ny tsirairay manokana ary tsy voatery ho nasionaly fa maningatsingana any amin'ny toerana lazaina fa efa olondehibe mahalala ny tokony ataony daholo no ao. Anisan'ny lohahevitra eo amin'ny resaka politika ny fahafahana sy ny sivana ary ny fanampenam-bava, fa tsy voatery ho avy amin'ny governemanta na avy amin'ny mpitondra ara-politika ihany no misy ny fanampenam-bava fa mety ho avy amin'ny sehatry ny asa ihany koa, ary niharan'izany indrindra ny tena.
Ela tokoa ny ela fa dia tonga tamin'ny tena koa ireo zava-mitranga any amin'ny firenen-kafa amin'ny fanakanana tranonkala sasantsasany izay nadika tao amin'ny Global Voices Online. Ilay Global Voices Online iray manontolo mihitsy no nosakanana tao amin'ilay toerana ary rehefa notsapatsapaina avokoa ny tranonkala hafa dia toa izy irery hatreto no niharan'izany fanakanana izany. Raha mitohy anefa izao ataoko izao dia mety hanara-dia ihany koa ity blaogy.com ity. Nefa tsy hay aloha izay ho tohiny. Raha ny lahatsoratra be mpamaky ao amin'ny GVO teny malagasy dia resaka manodidina ny vetaveta no tena mahasintona ny mpamaky sasantsasany, ka izay ve no mety antony? Jerena anefa hoe misy tranonkalam-betaveta voasakana ve? toa tsy misy...
Nosakanana ve ny media sosialy toy ny Facebook na Youtube izay fandanian'andro mahakely ny asa vita sy ny vokatra azo? Tsia... Efa nilaza am-bava ny lehibe tale jeneraly teo aloha, fony fahavelony, tao amin'ity toera-piasana ity fa tsy ankasitrahany mihitsy ny idiran'ny mpiasa miserasera amin'ny Facebook fa tsy nisy mihitsy ny fanakanana tsy ahazoana miditra aminy ara-teknika... dia rehefa tsy tratra eo am-piseraserana moa izany ny mpiasa dia tahaka ny hoe tsy niditra Facebook. Tsy nanakana ny fisian'ny mpitsikilo manokana ireo mpiasa midikiditra amin'io sehatra io any amin'ny misy azy any amin'ny fotoana fiasana izany tsy fisian'ny fanakanana ka raha tsy mahay manidy ny fikarajiana (Chat) dia mety ho voateny. Fa ity nanjò ity kosa toa fikendrena manokana, fa manana ny lazany tahaka ny ahoana ilay Global Voices Online ary inona no nataon'ilay GVO tamin'ilay toera-piasana? Na izaho aza tsy mahavaly ilay fanontaniana.
Raha ireo sehatra mampandany fotoana tsy iasana no notenenina sady nosakanana toy izao ka tsy misy afa-miditra daholo ny rehetra mba hafahafa ihany satria andeha atao hoe azoko ekena hoe manan-jò ny hanakana ireo tranonkala mampandany hery sy ora tsy iasana ny toeram-piasana. Raha tranonkalam-baovao mety tsy hampandany anao atsasakadiny mihitsy na hoe folo minitra akory aza dia mivandravandra fa resaka fanakanana tsy mitombina velively. Raha misy ny manana andraikitra hanakana tranonkalam-baovao dia tokony avy amin'ny governemanta, tsy mahazaka demaokrasia sy fahalalaham-pitenenana, mihitsy izany fa tsy avy amin'ny toera-piasana iray loatra. Tsotra ihany ny zavatra ambarako, enga anie izao mihatra izao tsy ho fihoaram-pefy na fanararaotam-pahefana!
Rehefa fakafakaina marivo sy lalina ny toe-draharaha dia tokana ihany no antony: Fialonana sy Tahotra (F&T). Tsy hitako loatra anefa izay antony mampialona fa efa ananany avokoa izay ananako ary manana betsaka mihoatra noho izaho aza izy ary tsy hitako izay hampatahotra satria olona ratsy naoty indrindra eo amin'ny lehibe tale jeneraly amin'izao fotoana izao aho satria efa niteny taminy ny tokony hanajana ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara ary efa tsy tsara naoty tamin'ny lehibe ambony nodimbiasin'ity farany ity ihany koa ka tsy hisy fahafahako hiakatra ambaratonga fa fanetrena aza no mety hihatra kokoa. Tamin'ny teo alohan'ireo olona roa ireo ihany aho no tsaratsara naoty fa efa tsy ao intsony ihany koa moa izy amin'izao fotoana izao. Tsy ho afaka ny haka ny toerany na oviana na oviana aho, noho izany, ary tsy afaka ny hitovy laharana aminy mihitsy.
Ho setrin'izany F&T izany anefa anefa dia lasa mitady ny F&T ahy koa aho: ny "Fahafahako" miditra hatrany ao amin'ilay sehatra ho "Tohitr'ilay" fanakanana atao mangingina satria tsy misy ny filazana ofisialy fa tsy azo idirana ny tranonkalan'ny Global Voices Online. Fa raha mbola apetraka ny hidim-baravarana dia apetraho naoty amin'ny fomba ofisialy izany ho hitan'ny rehetra dia tsy hiditra aho rehefa any am-piasana fa raha ny hanakana hoe tsy mahazo mandray anjara amin'ny GVO intsony ianao dia tsy azonao sakanana amin'izay ataoko aty an-trano aho.
Jentilisa 26 jolay 2015